Ndekupi kwatingawana maiko eAmerica keyword anowanikwa pasina?
Kupfuura gore rapfuura, ndave ndichishanda tsvakurudzo inoshandiswa pakushandisa-shandisa kuti pakupedzisira ione. Mubvunzo waiva - ndezvokwana zvakakwana kuti ugone kushandiswa kwekugadzirwa kwekambani kugadzirwa kweAmerica kungoshandisa keyword tool pasina chekuita, mune mamwe mazwi, inowanika mukusvikirika kuIndaneti. Uye mhinduro shoma ndeyekuti, ndiyo. Zvechokwadi, iwe unogona kunyatsogadzirisa kushanda kwebhizimisi rako rekutumira-kutengesa kuAmazon kungoshandisa keyword tool mukusununguka kwekusununguka, kana kuti pamwe ne-basic non-cut version inowanika pasina iyo inoshungurudza mwedzi imwe chete, . Heino izvo zvandinezvo zvekucherechedza kwako, uye regai nditaurezve zvakare - Ndiri kutora mazita ose ma Amazon mazita echishandiswa nekusununguka kushandiswa asi tichiri kuita zvigadziriswe chete. Saka, ngatitangei kutarisa mumwe nomumwe wavo.
SEO Stack - inoshandiswa pane imwe nzvimbo yepaIndaneti iyo ichiri pasi pekugadzirwa. Kunyange zvakadaro, inogona kutokupa maitiro akanaka kwazvo mukugadzira keywords, kuongorora keyword kukwikwidzana kuAmazon, uye kuwana mazano anobatsira pamusoro pemashoko makuru anovimbisa nemisungo yakareba-refu kuti uwedzere chigadzirwa chako chinyorwa sepro.
AMZ Sistrix - rutivi rwakasimba pane iyi iri paIndaneti inoshandiswa nekukurumidza uye kushandiswa kwunifomu. Ndinoreva kuti iwe unogona kushandisa AMZ Sistrix kuti akupe iwe neshoko rinokosha repamusoro kwete kuAmazon chete asi Google uye eBay pamwe chete. Zvose zvaunoda ndeyokuzadza chinhu chikuru-uye zvimwe zvose zvichaitwa kwauri, nokukurumidza, nyore, uye zvechokwadi pasina.
Seller Seller - iri purogiramu iri paIndaneti inonzi antipode yakakwana yeyakambotaurwa. Ndinoreva kuti kusiyana nemamwe mashandisirwo akajeka uye akareruka, Scientific Seller ari kunonoka kuitira kuti kunyange basa rimwe rekutsvakurudza rinogona kutora nguva yose. Kunyange zvakadaro, chikwata ichi chinoita basa uye riri kutarisa nzira yacho zvakanyatsojeka pasina mari yekushandisa mari.
Sonar - imwewo maAmerica keyword tool nekushandisa kusununguka. Chaizvoizvo, zvinouya sekuwedzera kweGoogle kuve yakanyatsojeka. Chero zvazviri, Sonar anotsigira pane zvakaoma kutsvaga nekunyora maitiro ekugadzirisa kubata mazwi ose ezvinyorwa zvakanyanya anoshandiswa nevatengi vanogara pamusika. Nokuda kwechimwe chikonzero ndinonzwa kuti haisi yezvinhu zvakanyatsogadzirwa, zvinonzi nguva nenguva uye kunyanya kubva kune rumwe ruzivo rwekutengesa ecommerce vatengesi. Asi ini ndakanga ndisingabvumirani zvachose, nokuti Sonar akandishandira ini zvakanaka, kunyanya kune shred ye data yakawanikwa nayo.
Google Keyword Planner - zvakanyanyisa, hapana kuseka pano, sezvo iyi inonyanya kuiswa panzvimbo yepaIndaneti inotsvaga kutsvaga kwenyika inogona kunge iri mhinduro yakanakisisa inowanikwa kune vhizimisi vebhizimisi uye webmasters vekare, kuchikoro sekugara. Sezvakangoita kwemakore, Google AdWords yakachengetedza simba rayo guru kukubatsira kuti uzive zvakanakisisa mazwi anokosha anotsigirwa nemafungiro akafanana anobatsira (zvisinei nokuti chinangwa chei - kana kune michina yakanyorwa muAmazon, kana chero yemhando yebasa yakasununguka uye yakakwana yega- akakwana) Source .